တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအား ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
အောက်တိုဘာ ၂၊ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၈
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၂
တပ်မတော်အနေဖြင့် တိုင်းပြည်၏အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်လုံခြုံမှုအတွက် မဖြစ်မနေ အကာအကွယ် ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် လည်း သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ကျင့်ဝတ်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နေ ကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး H.E. General Ngo Xuan Lich နှင့်နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌တွေ့ဆုံစဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
ဦးစွာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး H.E. General Ngo Xuan Lich အား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဇေယျာသီရီဗိမာန်ရှေ့တွင် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆိုသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူကြပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့အား လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့သည် အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသော တပ်မတော်အရာရှိကြီးများကို အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပေးကြသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မ တော် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် အတူ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် Sr. Lt. Gen. Nguyen Phuong Nam နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံစစ်သံမှူး Col. Nguyen Duc Giang တို့တက်ရောက်ကြသည်။
ထို့နောက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး H.E. General Ngo Xuan Lich သည် ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မိတ်ဆွေရင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ မြန်မာ-ဗီယက်နမ်နှစ်နိုင်ငံအကြား ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးကိုအလေးထားကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးစနစ်ပြောင်းလဲသွားသော်လည်း နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုမှာ မူလရှိရင်းစွဲအတိုင်းရှိခဲ့ကြောင်း၊ အဆွေ တော်၏ ခရီးစဉ်သည်လည်း နှစ်နိုင်ငံ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ပိုမိုခိုင်မာစေသည့် ခြေလှမ်းသစ်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ဦးစွာပြောကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှု နှင့်ပတ်သက်၍ ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အထိ မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရက ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကျင့်သုံးခဲ့ ကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူကရွေးချယ် သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့်လည်း ယင်းနိုင်ငံရေးစနစ် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နှင့် ခိုင်ခိုင်မာမာရှိစေရန် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ အဓိကအားဖြင့် နိုင်ငံရေး အရတည်ငြိမ်မှု၊ လုံခြုံရေးအရတည်ငြိမ်မှုရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနေကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကတိုင်းရင်းသား ၈ မျိုးနှင့် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုပေါင်း ၁၃၅ မျိုးခန့် ရှိ၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသော နိုင်ငံတစ်ခုဟုဆိုနိုင်ကြောင်း၊ ယင်းအဖွဲ့များသည် နောက်ခံအကြောင်းအရာမှစ၍ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ တူညီမှုမရှိသဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ခက်ခဲစွာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရ ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် အဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့နှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အမှန်တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူလိုစိတ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက ကျန်အဖွဲ့များလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိမည်ဟုယုံကြည်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် ရခိုင် ပြည်နယ်မြောက်ခြမ်းတွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေသည့်ပဋိပက္ခမှာ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီကပင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရောက်ရှိနေထိုင်ခဲ့ သည့် ဘင်္ဂါလီများက စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုလိုနီခေတ်တွင် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့က ဘင်္ဂလားနယ်မှ လူများကို ခေါ်ယူခဲ့ရာမှ တဖြည်းဖြည်းလူဦးရေတိုးပွားလာကြောင်း၊ ရှေးယခင်က ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသတွင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများက လူများစုဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂါလီများက လူနည်းစုဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများကို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ် မောင်းထုတ်ပြီး ယင်းဒေသ၌ တဖြည်းဖြည်း ဘင်္ဂါလီလူဦးရေ တိုးပွားလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုဆိုလျှင် ဘင်္ဂါလီကအများစုဖြစ်ပြီး ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများက လူနည်းစုဖြစ် ကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့်သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်တွင် ရဲကင်းစခန်း ၃၀ ခုနှင့်တပ်ဌာနချုပ်တစ်ခု တို့အား ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက် သမား အင်အား ၄၀၀၀ ခန့်က၀ိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ ရဲစခန်းအများစုမှာ စခန်းတစ်ခုလျှင် အင်အား ၁၀ ဦးမှ ၂၀ ဦးအထိသာ ရှိကြပြီး စခန်းအချို့သာလူအင်အားအနည်းငယ်ပိုရှိနိုင်သော်လည်း ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများက ရဲစခန်းတစ်ခုလျှင် လူအင်အား ၂၀၀၊ ၃၀၀ မှ ၅၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကြောင်း၊ အကယ်၍ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လက်နက်များဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပါက ယခုထက်ပို၍ အကြမ်းဖက်သူများစွာ သေဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုပြဿနာသည် ဘာသာရေးအရဖြစ်ပွားသည့် ပဋိပက္ခမဟုတ်ဘဲ မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်း ရောက်ရှိနေထိုင်သူများက နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မှုကို လက်မခံသောကြောင့် လှုံ့ဆော်မှုများပြုလုပ်ရာမှ ဖြစ်ပွားလာ ခြင်းသာဖြစ် ကြောင်း၊ ယင်းဘင်္ဂါလီများ ထွက်ပြေးမှု နှင့်ပတ်သက်၍လည်း ၎င်းတို့အနေဖြင့် လူနည်းစုဖြစ်သည့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များကို ရက်စက်စွာအကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်မလုံခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရမှု ရှိသည်ဟုယူဆ ရသည့် မျိုးနွယ်တူသူများထံသို့ သွား ရောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ အဆိုပါကိစ္စအား နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဥပဒေနှင့်အညီသာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင် မည် ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ဧည့်သည်တော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံသည် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ကာလကြာရှည်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မိမိခရီးစဉ်အပေါ် ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုများသည်လည်း နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား စည်းလုံးညီညွတ်မှု နှင့်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုများကို တွေ့မြင်နိုင်ပါကြောင်း၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးကို အလေးထားသကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုအလေးထား ပါကြောင်း၊ ယခုခရီး စဉ်သည်လည်း တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုတိုးမြင့်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်အလှည့်ကျ ဆောင်ရွက်ရမည့်အခြေအနေများ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ ADMM အပေါင်း ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်မည့်အခြေအနေများ၊ ဗီယက်နမ် တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စရပ်များ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေမျိုးကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအနေဖြင့် တစ်ချိန်က ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့်ပြည်သူတို့ ပူးပေါင်းကျော်လွှားနိုင်ခဲ့မှုအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး မြန်မာ့တပ်မတော် အနေဖြင့်လည်း လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှား၍ နိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူက ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို အောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင် မည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေး နှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မတော် အဆင့်မြင့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေး၊ အရာရှိငယ်များ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရေး၊ တပ်မတော်(ရေ)ဆိုင်ရာ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များစေလွှတ်ရေး၊ လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သုတေသနပြုရေး၊ ဆေးကုသရေးတို့တွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အားကစားအဖွဲ့များ အပြန်အလှန်စေလွှတ်ရေး၊ ဒေသအတွင်း လုံခြုံရေးနှင့်နိုင်ငံတကာ အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက် ထောက်လှမ်းရေး သတင်းများ ဖလှယ် ရေး၊ နယ်စပ်ဒေသစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အတွေ့အကြုံဖလှယ်ရေး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွင် နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်ရေးတို့ အား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ် ကြပြီး အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွင်းက ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံသို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး H.E. General Ngo Xuan Lich ၏ ဖိတ်ကြား ချက်အရ ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားရောက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ General Ngo Xuan Lich သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသို့ ယခုချစ်ကြည်ရေးခရီး အပြန်အလှန်လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တပျမတျောအနဖွေငျ့ တိုငျးပွညျ၏အခြုပျအခွာအာဏာပိုငျဆိုငျမှုနှငျ့ တိုငျးရငျးသားပွညျသူမြား၏ အသကျအိုးအိမျ စညျးစိမျလုံခွုံမှုအတှကျ မဖွဈမနေ အကာအကှယျ ပေးရမညျဖွဈကွောငျး၊ ထိုသို့လုပျဆောငျရာတှငျ လညျး သတျမှတျပွဋ်ဌာနျးထားသညျ့ ကငျြ့ဝတျမြား၊ စညျးမဉျြးစညျးကမျး ဥပဒမြေားနှငျ့အညီ ဆောငျရှကျနေ ကွောငျးဖွငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီး H.E. General Ngo Xuan Lich နှငျ့နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌တှဆေုံ့စဉျ ထညျ့သှငျးပွောကွားသညျ။
ဦးစှာ ဗီယကျနမျနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီး H.E. General Ngo Xuan Lich အား တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက ဇယြောသီရီဗိမာနျရှတှေ့ငျ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ဖွငျ့ ကွိုဆိုသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဗီယကျနမျနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးတို့သညျ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့၏ အလေးပွုခွငျးကိုခံယူကွပွီး ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့အား လိုကျလံကွညျ့ရှုစဈဆေးသညျ။ ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဗီယကျနမျနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးတို့သညျ အခမျးအနားတကျရောကျလာကွသော တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားကို အပွနျအလှနျမိတျဆကျပေးကွသညျ။
အဆိုပါဂုဏျပွုကွိုဆိုပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးနှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမ တျော အရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး ဗီယကျနမျနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးနှငျ့ အတူ ဒုတိယစဈဦးစီးခြုပျ Sr. Lt. Gen. Nguyen Phuong Nam နှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျ နိုငျငံစဈသံမှူး Col. Nguyen Duc Giang တို့တကျရောကျကွသညျ။
ထို့နောကျ ဗီယကျနမျနိုငျငံကာကှယျရေးဝနျကွီး H.E. General Ngo Xuan Lich သညျ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျးစာအုပျတှငျ မှတျတမျးတငျလကျမှတျ ရေးထိုးပွီး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ တှဆေုံ့ဆှေးနှေး ကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မိတျဆှရေငျးနိုငျငံမြား ဖွဈသညျနှငျ့အညီ မွနျမာ-ဗီယကျနမျနှဈနိုငျငံအကွား ၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ဆကျဆံရေးကိုအလေးထားကွောငျး၊ မိမိတို့နိုငျငံတှငျ နိုငျငံရေးစနဈပွောငျးလဲသှားသျောလညျး နှဈနိုငျငံခဈြကွညျရငျးနှီးမှုမှာ မူလရှိရငျးစှဲအတိုငျးရှိခဲ့ကွောငျး၊ အဆှေ တျော၏ ခရီးစဉျသညျလညျး နှဈနိုငျငံ၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုကို ပိုမိုခိုငျမာစသေညျ့ ခွလှေမျးသဈတဈရပျဖွဈကွောငျး ဦးစှာပွောကွားသညျ။
ဆကျလကျပွီး မွနျမာနိုငျငံ၏ဖွဈပျေါပွောငျးလဲမှု နှငျ့ပတျသကျ၍ ၁၉၇၄ ခုနှဈမှ ၁၉၈၈ ခုနှဈအထိ မွနျမာ့ ဆိုရှယျလဈလမျးစဉျပါတီအစိုးရက ဆိုရှယျလဈစနဈကငျြ့သုံးခဲ့ ကွောငျး၊ ၂၀၁၁ ခုနှဈတှငျ ပွညျသူကရှေးခယျြ သညျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးကို ပွောငျးလဲကငျြ့သုံးခဲ့ကွောငျး၊ တပျမတျောအနဖွေငျ့လညျး ယငျးနိုငျငံရေးစနဈ တညျတညျငွိမျငွိမျနှငျ့ ခိုငျခိုငျမာမာရှိစရေနျ လုပျဆောငျနကွေောငျး၊ အဓိကအားဖွငျ့ နိုငျငံရေး အရတညျငွိမျမှု၊ လုံခွုံရေးအရတညျငွိမျမှုရှိအောငျ လုပျဆောငျပေးနကွေောငျး၊ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခမြား ခြုပျငွိမျးရေးအတှကျ ငွိမျးခမျြးရေးကို ဖျောဆောငျနဆေဲဖွဈကွောငျး၊ အဓိကတိုငျးရငျးသား ၈ မြိုးနှငျ့ တိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျစုပေါငျး ၁၃၅ မြိုးခနျ့ ရှိ၍ ကမ်ဘာပျေါတှငျ တိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျစုမြားပွီး တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့မြားသော နိုငျငံတဈခုဟုဆိုနိုငျကွောငျး၊ ယငျးအဖှဲ့မြားသညျ နောကျခံအကွောငျးအရာမှစ၍ တဈဖှဲ့နှငျ့တဈဖှဲ့ တူညီမှုမရှိသဖွငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ခကျခဲစှာညှိနှိုငျးဆှေးနှေးရ ကွောငျး၊ လကျရှိတှငျ အဖှဲ့ ၈ ဖှဲ့နှငျ့ NCA လကျမှတျရေးထိုးပွီးဖွဈကွောငျး၊ အမှနျတကယျ ငွိမျးခမျြးရေးရယူလိုစိတျဖွငျ့ လုပျဆောငျမညျဆိုပါက ကနျြအဖှဲ့မြားလညျး ငွိမျးခမျြးရေး လမျးကွောငျးပျေါသို့ ရောကျရှိမညျဟုယုံကွညျကွောငျး ရှငျးလငျး ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ ပွောကွားရာတှငျ ရခိုငျ ပွညျနယျမွောကျခွမျးတှငျ လကျရှိ ဖွဈပှားနသေညျ့ပဋိပက်ခမှာ မွနျမာနိုငျငံလှတျလပျရေးမရမီကပငျ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ရောကျရှိနထေိုငျခဲ့ သညျ့ ဘင်ျဂါလီမြားက စတငျခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး၊ ကိုလိုနီခတျေတှငျ နယျခြဲ့အင်ျဂလိပျတို့က ဘင်ျဂလားနယျမှ လူမြားကို ချေါယူခဲ့ရာမှ တဖွညျးဖွညျးလူဦးရတေိုးပှားလာကွောငျး၊ ရှေးယခငျက ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတော ဒသေတှငျ ဒသေခံတိုငျးရငျးသားမြားက လူမြားစုဖွဈပွီး ဘင်ျဂါလီမြားက လူနညျးစုဖွဈကွောငျး၊ ၁၉၄၂ ခုနှဈတှငျ ဒသေခံတိုငျးရငျးသားမြားကို တိုကျခိုကျသတျဖွတျ မောငျးထုတျပွီး ယငျးဒသေ၌ တဖွညျးဖွညျး ဘင်ျဂါလီလူဦးရေ တိုးပှားလာခွငျးဖွဈကွောငျး၊ ယခုဆိုလြှငျ ဘင်ျဂါလီကအမြားစုဖွဈပွီး ဒသေခံတိုငျးရငျးသားမြားက လူနညျးစုဖွဈ ကွောငျး၊ ပွီးခဲ့သညျ့သွဂုတျလ ၂၅ ရကျနဖွေ့ဈစဉျတှငျ ရဲကငျးစခနျး ၃၀ ခုနှငျ့တပျဌာနခြုပျတဈခု တို့အား ဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျ သမား အငျအား ၄၀၀၀ ခနျ့ကဝိုငျးဝနျးတိုကျခိုကျခဲ့ကွောငျး၊ ရဲစခနျးအမြားစုမှာ စခနျးတဈခုလြှငျ အငျအား ၁၀ ဦးမှ ၂၀ ဦးအထိသာ ရှိကွပွီး စခနျးအခြို့သာလူအငျအားအနညျးငယျပိုရှိနိုငျသျောလညျး ဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျသမားမြားက ရဲစခနျးတဈခုလြှငျ လူအငျအား ၂၀၀၊ ၃၀၀ မှ ၅၀၀ ၀နျးကငျြခနျ့ဖွငျ့ ၀ိုငျးဝနျး တိုကျခိုကျခဲ့ကွကွောငျး၊ အကယျ၍ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားအနဖွေငျ့လကျနကျမြားဖွငျ့ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ပဈခတျတိုကျခိုကျပါက ယခုထကျပို၍ အကွမျးဖကျသူမြားစှာ သဆေုံးမညျဖွဈကွောငျး၊ ယခုပွဿနာသညျ ဘာသာရေးအရဖွဈပှားသညျ့ ပဋိပက်ခမဟုတျဘဲ မိမိတို့နိုငျငံအတှငျး ရောကျရှိနထေိုငျသူမြားက နိုငျငံ၏ တညျဆဲဥပဒနှေငျ့အညီ ဆောငျရှကျမှုကို လကျမခံသောကွောငျ့ လှုံ့ဆျောမှုမြားပွုလုပျရာမှ ဖွဈပှားလာ ခွငျးသာဖွဈ ကွောငျး၊ ယငျးဘင်ျဂါလီမြား ထှကျပွေးမှု နှငျ့ပတျသကျ၍လညျး ၎င်းငျးတို့အနဖွေငျ့ လူနညျးစုဖွဈသညျ့ ဒသေခံတိုငျးရငျးသားမြား၊ ဟိန်ဒူဘာသာဝငျမြားကို ရကျစကျစှာအကွောငျးမဲ့ သတျဖွတျခဲ့မှုနှငျ့ပတျသကျ၍ ကိုယျ့ကိုယျ ကိုယျမလုံခွငျးကွောငျ့ ၎င်းငျးတို့အတှကျလုံခွုံစိတျခရြမှု ရှိသညျဟုယူဆ ရသညျ့ မြိုးနှယျတူသူမြားထံသို့ သှား ရောကျခွငျးဖွဈနိုငျကွောငျး၊ အဆိုပါကိစ်စအား နိုငျငံတျောအစိုးရက ဥပဒနှေငျ့အညီသာ ဆကျလကျလုပျဆောငျ မညျ ဖွဈကွောငျးရှငျးလငျးပွောကွားသညျ။
ဧညျ့သညျတျောကာကှယျရေးဝနျကွီးက မိမိတို့နှဈနိုငျငံသညျ မိတျဖကျဆကျဆံရေး ကာလကွာရှညျခဲ့ပါကွောငျး၊ မိမိခရီးစဉျအပျေါ ဧညျ့ဝတျကပြှေနျမှုမြားသညျလညျး နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား စညျးလုံးညီညှတျမှု နှငျ့ခဈြခငျရငျးနှီးမှုမြားကို တှမွေ့ငျနိုငျပါကွောငျး၊ ဗီယကျနမျနိုငျငံအနဖွေငျ့ အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားနှငျ့ ဆကျဆံရေးကို အလေးထားသကဲ့သို့ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ဆကျဆံရေးကို ပိုမိုအလေးထား ပါကွောငျး၊ ယခုခရီး စဉျသညျလညျး တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုကို ပိုမိုတိုးမွငျ့နိုငျမညျဟု ယုံကွညျကွောငျး ပွနျလညျပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈတှငျ ဗီယကျနမျနိုငျငံအနဖွေငျ့ အာဆီယံဥက်ကဋ်ဌ အဖွဈအလှညျ့ကြ ဆောငျရှကျရမညျ့အခွအေနမြေား၊ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှစ၍ ADMM အပေါငျး ဆှေးနှေးပှဲမြားပွုလုပျမညျ့အခွအေနမြေား၊ ဗီယကျနမျ တပျမတျောအနဖွေငျ့ နိုငျငံတျောတညျငွိမျအေးခမျြးရေး၊ ကာကှယျရေးနှငျ့ တညျဆောကျရေး လုပျငနျးမြား၊ ပွညျတှငျးရေးကိစ်စမြား၊ ငွိမျးခမျြးရေး ကိစ်စရပျမြား၊ ဆငျးရဲမှဲတမှေုပပြောကျရေးလုပျငနျးမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏အခွအေနမြေိုးကို ဗီယကျနမျနိုငျငံအနဖွေငျ့ တဈခြိနျက ရငျဆိုငျခဲ့ရပွီး နိုငျငံတျောအစိုးရ၊ တပျမတျောနှငျ့ပွညျသူတို့ ပူးပေါငျးကြျောလှားနိုငျခဲ့မှုအခွအေနမြေားကို ရှငျးလငျးဆှေးနှေးပွီး မွနျမာ့တပျမတျော အနဖွေငျ့လညျး လကျရှိကွုံတှနေ့ရေသော အခကျအခဲပွဿနာမြားကို ရငျဆိုငျကြျောလှား၍ နိုငျငံတျောနှငျ့ပွညျသူက ပေးအပျသညျ့တာဝနျမြားကို အောငျမွငျစှာထမျးဆောငျနိုငျ မညျဟုယုံကွညျကွောငျးပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမွှငျ့တငျရေး နှငျ့ပတျသကျ၍ တပျမတျော အဆငျ့မွငျ့ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျလညျပတျရေး၊ အရာရှိငယျမြား အခငျြးခငျြးအပွနျအလှနျ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုမြားပွုလုပျရေး၊ တပျမတျော(ရေ)ဆိုငျရာ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြားစလှေတျရေး၊ လကေ့ငျြ့ရေးဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုနှငျ့ ဆေးဘကျဆိုငျရာ သုတသေနပွုရေး၊ ဆေးကုသရေးတို့တှငျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုမွှငျ့တငျရေး၊ ယဉျကြေးမှုနှငျ့အားကစားအဖှဲ့မြား အပွနျအလှနျစလှေတျရေး၊ ဒသေအတှငျး လုံခွုံရေးနှငျ့နိုငျငံတကာ အကွမျးဖကျမှု တားဆီးကာကှယျရေးအတှကျ ထောကျလှမျးရေး သတငျးမြား ဖလှယျ ရေး၊ နယျစပျဒသေစီမံခနျ့ခှဲမှုဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားအား တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခွငျးဖွငျ့ အတှအေ့ကွုံဖလှယျရေး၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာနမြားအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမွှငျ့တငျရေး၊ ဆကျသှယျရေးကဏ်ဍတှငျ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ အရှိနျအဟုနျမွှငျ့တငျလုပျဆောငျရေးတို့ အား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဗီယကျနမျနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျ ကွပွီး အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ မတျလအတှငျးက ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံသို့ ကာကှယျရေးဝနျကွီး H.E. General Ngo Xuan Lich ၏ ဖိတျကွား ခကျြအရ ခဈြကွညျရေးခရီးသှားရောကျခဲ့ပွီး အဆိုပါခရီးစဉျအတှငျး ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ၏ ဖိတျကွားခကျြအရ General Ngo Xuan Lich သညျ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံသို့ ယခုခဈြကွညျရေးခရီး အပွနျအလှနျလာရောကျခွငျးဖွဈပါသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်(၈)ကြိမ်မြောက် မော်စကိုနိုင်ငံတကာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတက်ရောက်၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး